Malunga nathi - Galveston County Food Bank
Ifoto kwiPhephandaba lePosi
Abasunguli uMark Davis kunye noBill Ritter baqala ukuKhothoza kwiGalveston ngo-2003 njengombutho owamkelayo nosasazwayo osebenza kwiofisi yangasemva yecawa yaseGalveston Island. Ngenjongo yexesha elide yokuseka ibhanki yokutya yelizwe lonke, umbutho omncinci wafudusela imisebenzi yawo ngoJuni 2004 kwiziko elikhulu. Ngelixa besisesisiqithi, indawo entsha yavumela indawo yokufumana kunye nokugcina ubuninzi bokutya okunkonkxiweyo, okomileyo, okutsha kunye nokubandayo, izinto zococeko lomntu, kunye nezinto zokucoca ezinikelwe ngokuthe ngqo kubavelisi bokutya, iivenkile zasekuhlaleni kunye nabantu. Emva koko, ubuninzi obulawulwayo beemveliso babufumaneka ukuze busasazwe ngothungelwano lwemibutho yamahlakani asebenzisanayo anceda abahlali besiqithi abasokola ukhuseleko lokutya.
Imfuno yokutya yaqala ukuchitheka ukuya kwilizwekazi, kwaye kwabonakala ukuba umbono wabaseki wawusenzeka njengoko iinkonzo zakhawuleza ukukhawulela umda weziqithi zawo. Ngelixa umbutho wawukwizigaba zokuqala zokukhangela indawo esembindini ukulungiselela ukuhanjiswa okungcono kokutya kuyo yonke loo ndawo, iNkanyamba uIke yabetha. Nangona kubangela indalo ebantwini nakwipropathi, ukubuyela kwimeko yesiqhwithi kwanika umbutho ukufikelela kwiidola zombuso ezenzelwe ukunceda imibutho ekhonza abahlali abenzakaliswe ngqo yinkanyamba. Oku kwavumela umbutho ukuba ufuduke ngo-2010 imisebenzi yawo yokugcina izinto ukusuka esiqithini ukuya kwindawo enkulu, esembindini eTexas City kwaye yamkela igama elithi Galveston County Food Bank.
Ukukhokela umlo wokuphelisa indlala eGalveston County
Xa intsapho yasekuhlaleni ikwingxaki yemali okanye eminye imiqobo, ukutya kudla ngokuba yeyona nto ifunekayo kuqala. Galveston County Food Bank ibonelela lula ukutya okunesondlo kwabahlelelekileyo ngokwezoqoqosho, phantsi kwabemi wakhonza of Galveston County ngokusebenzisa uthungelwano inxaxheba imibutho yesisa, izikolo kunye neenkqubo zokutya ezilawulwa yibhanki egxile ekukhonzeni abantu abasesichengeni. Sikwabonelela aba bantu kunye neentsapho ngezibonelelo ezingaphaya kokutya, ezidibanisa nezinye ii-arhente kunye neenkonzo ezinokuthi zincede kwiimfuno ezifana nokunakekelwa kwabantwana, ukubekwa kwemisebenzi, unyango lwentsapho, ukhathalelo lwempilo kunye nezinye izixhobo ezinokuthi zibancede babuyele ezinyaweni zabo kwaye baqhubeke. indlela yokubuyisela kunye / okanye ukuzimela.
Iinjongo eziphambili zoMbutho
Ukuphelisa ukunqabiseka kokutya kwiGalveston County
Uncedo ekunciphiseni ukutyeba kakhulu phakathi kwabahlali abanengeniso ephantsi
Dlala indima ebalulekileyo ekuncedeni abahlali abomeleleyo ekufezekiseni ukwanela
Dlala indima ebalulekileyo ekuncedeni abahlali abangakwaziyo ukusebenza ukuze baphile ubomi obusempilweni nobukhuselekileyo
Inkonzo kunye nempumelelo
Ngothungelwano olungaphezulu kwe-80 yee-arhente ezisebenzisanayo, izikolo kunye neendawo eziphathwayo eziphathwayo, iGalveston County Food Bank isasaza ngaphezulu kwe-700,000 yeeponti zokutya ngenyanga ukuze usasazwe ngokutsha ngeepantries, iikhitshi zesuphu, iindawo zokuhlala kunye namanye amaqabane angenzi nzuzo asebenza kunye ukuze asebenze rhoqo ngenyanga malunga ne-23,000. abantu kunye neentsapho ezithwaxwa yindlala. Ukongeza, umbutho ugxile ekunciphiseni indlala phakathi kwabantu abasesichengeni ngokusebenzisa amaqabane awo womnatha kunye nezi nkqubo zilandelayo ezilawulwa yibhanki yokutya:
Ukuhanjiswa kokutya okushenxiswayo kuzisa isixa esikhulu semveliso esitsha ngokusebenzisa iitreyila zetrektara ezihambahambayo kwiindawo ezithile ngeveki, zikhonza ukuya kuthi ga kuma-700 abantu kwilori nganye.
Ukufikelela kwizondlo okunesondlo ekhaya kunika iibhokisi zokutya inyanga nenyanga kubantu abadala okanye abantu abakhubazekileyo abangenayo indlela okanye impilo yokutyelela amakhekhe okanye iisayithi ezihambayo.
Ukubonelelwa kwabantwana ngeZondlo kubonelela ukutya ngeempelaveki ngeBackpack Buddies kunyaka wesikolo kunye neveki nganye uKidz Pacz ehlotyeni.